Home - MeroKhelkud
४.५ करोड पाउन्डमा जिसस आर्सनल जाने पक्का
अलमुताइरी पुन: नेपाली टिमको कोच बन्ने, १० बिद्रोही खेलाडीको भबिष्य के होला ?
म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग असन्तुष्ट भए रोनाल्डो
मोटो रकम पाए नेयमारलाई बेच्न पीएसजी तयार
वेल्सलाई ६४ वर्षपछि विश्वकप खेलाउने ग्यारेथ बेलले पनि रियल म्याड्रिड छोडे
नेपाली समय अनुसार यस्तो छ कतार विश्वकपको खेल तालिका
२०७९ असार १ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
इन्डोनेसियासँग नेपालको शर्मनाक हार, १० शिनियर खेलाडी निकाल्दाको परिणाम ?
रियल मड्रिडबाट बिदा हेदाँ धुरुधुरु रोए मार्सेलो
२०७९ जेष्ठ ३१ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
मोटो रकम लिएर म्यान्चेस्टर सिटीमा भित्रिए हालान्ड, अब सिटीलाई कसले हराउँने ?
२०७९ जेष्ठ ३० गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
रोनाल्डो बिनाको पोर्चुगल स्विजरल्यान्डसँग पराजित
२०७९ असार १४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
२०७९ असार १२ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
घरेलु टोली भारतमाथि दक्षिण अफ्रिकाको रोमाञ्चक जित
२०७९ जेष्ठ २७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
कमजोर ब्याटिङले चुर्लुम्मल डुब्यो नेपाल, जिति सकेको खेलमा पराजित
थाईल्याण्डसँग पराजित भएसँगै यु-१९ बिश्वकप छनोटबाट रित्तो हात घर फर्कियो
२०७९ जेष्ठ २४ गते २०७९ जेष्ठ २४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
अमेरिकामा रोहितको शतकीय पारीमा नेपालको सहज जित
२०७९ जेष्ठ २२ गते २०७९ जेष्ठ २२ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर
काठमाडौं : एएफसी एसियन कप २०२३ अन्तर्गत तेस्रो चरणमा नेपालले खराब प्रदर्शन गरेको छ। समूह ‘ए’ मा रहेको नेपाल लगातार तेस्रो खेलमा पराजित भयो। बुधबार विहान कुवेत सिटीमा सकिएको खेलमा नेपालमाथि इन्डोनेसियाले ७-० गोलको फराकिलो अन्तरको जित हात पार्‍यो। नेपालविरुद्ध इन्डोनेसियाले पहिलो हाफमा दुई गोल गर्दा दोस्रो हाफमा पाँच गोल थपेको थियो। इन्डोनेसियाका लागि मोहमद […]
काठमाडौं । स्पेनिस महारथि क्लब रियल मड्रिडले डिफेन्डर मार्सेलोको भव्य बिदाइ गरेको छ । सोमबार क्लबले सान्टियागो वर्नावेउमा कप्तानसमेत रहेका ब्राजिलियन स्टार खेलाडी मार्सेलोको बिदाई गरेको हो । ३४ वर्षीय लेफ्ट ब्याक मार्सेलो १५ वर्ष रियलमा बिताएका थिए । मार्सेलो सन् २००७ मा रियल आएका थिए । त्यसयता उनले २५ उपाधि जितेका छन् । जसमा […]
काठमाडौं । नर्वेजियन स्ट्राइकर एर्लिङ हालान्ड पाँच वर्षको सम्झौतामा इङलिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्धित भएका छन् । सोमबार सिटीले औपचारिक रुपमा हालान्डलाई ५१.२ मिलियन युरोमा क्लबमा भित्र्याएको हो । यसअघि जर्मन लिग बुन्डेस्लिगामा बुरोसिया डर्टमन्डबाट खेलेका २१ वर्षीय हालान्डले ८९ खेल खेल्दै ८६ गोल गरेका छन् । हालान्डले साल्नवर्ग र डर्टमन्डबाट कुल १२१ खेल खेल्दै […]
काठमाडौं । स्टार खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोबिनाको पोर्चुगल आइतबार राति यूइएफए नेसन्स लिगमा स्विजरल्यान्डसँग १–० अन्तरले पराजित भएको छ । घरेलु टोली स्विजरल्यान्डको जितमा हरिस सेफेरोभिकले पहिलो मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । बाँकी समय दुवै टोलीले गोलका अवसर बनाएपनि सदुपयोग गर्न सकेनन् । चोटका कारण स्टार खेलाडी रोनाल्डो भने उपस्थित रहेनन् । हारसँगै पोर्चुगलले […]
बलियो कुवेतबिरुद्ध नेपाली युवा टिमको जुझारु प्रदर्शन, गोल समेत फर्कायो
२०७९ जेष्ठ २९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं : नेपालले एएफसी एसियन कप २०२३ छनोटको तेस्रो चरणअन्तर्गत समूह ‘ए’ को दोस्रो खेलमा आयोजक कुवेतसँग हार बेहोरेको छ। कुवेतस्थित जाबिर अल अहमद मैदानमा शनिबार सम्पन्न खेलमा नेपाल घरेलु टोली कुवेतसँग ४–१ को फराकिलो अन्तरले पराजित भएको हो। घरेलु टोलीको जितमा युसुफ नास्सेरले दुई तथा फहद अलरेसिदी र मोवारक अल फानेनीले समान एक गोल […]
२०७९ जेष्ठ २७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
२०७९ जेष्ठ २४ गते २०७९ जेष्ठ २४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
२०७९ जेष्ठ २२ गते २०७९ जेष्ठ २२ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
यूएईसँग नेपाल ८ रनमा अलआउट
२०७९ जेष्ठ २१ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
यू-१९ विश्वकप एसिया छनोट : आज नेपाल र यूएई खेल्दै
काठमाडौं । नेपाली फुटबलका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाल फर्कनका लागि सकरात्मक रहेको एन्फाले जनाएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै प्रशिक्षक अलमुताइरी नेपाल फर्कने नफर्कने अन्योलि थियो । पछिल्लो समय निकै विवादमा रहेका प्रशिक्षक अलमुताइरीको एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङसँगको सम्बन्ध सुमधुर छैन । जतिबेला नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए, […]
काठमाडौँ । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले म्यानचेस्टर युनाइटेड छोड्नसक्ने मिडिया रिपोर्ट सार्बजनिक भएको छ । एक बर्ष सम्झौता बाँकि रहेपनि म्यानचेस्टर युनाइटेडले नयाँ खेलाडी किन्ने बारे चासो नदिएको भन्दै रोनाल्डोले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार रोनाल्डोले क्लबको व्यवस्थापनका केहि अघिकारीहरुलाई खेलाडी भित्र्याउने विषयमा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले टिमलाई […]
काठमाडौं : राम्रो अफर आए यो ट्रान्सफर विन्डोमा नेयमार बेच्न पेरिस सेन्ट जर्मेन तयार रहेको गोल डटकमले जनाएको छ । तर ब्राजिलका स्टार भने क्लब छाड्न तयार नरहेको बताइएको छ । ​नेयमार सन् २०१८ मा बार्सिलोनाबाट त्यतिबेलाको विश्व कीर्तिमानी रकममा पेरिस पुगेका थिए । युरोपियन फुटबलमा सफलता हासिल गर्न पीएसजीले नेयमारलाई भित्र्याएको थियो । तर, […]
म्याड्रिड । वेल्सका कप्तान गारेथ बेलले स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिड छाड्ने भएका छन् । अमेरिकी मेजर लिग सकर क्लब लस एन्जलस एफसीमा उनी जाने पक्का भएको बीबीसीले जनाएको छ । यसै वर्ष मात्र रियल म्याड्रिड र बेलबीच सम्झौता सकिएको थियो । रियल म्याड्रिडका लागि ९ वर्ष खेल्ने क्रममा ३२ वर्षीय बेलले पाँचपटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिग […]
साडियो माने लिभरपुल छाडेर तीन वर्षका लागि वायर्नमा आबद्ध
२०७९ असार ९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं। सेडियो मानेले इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुल छाडेका छन्। जर्मन बुन्डेस लिगा क्लब बायर्न म्युनिखले मानेलाई ३५ मिलियन पाउन्डमा आबद्ध गरेको छ। बायर्न र मानेबीच तीन वर्षका लागि सम्झौता भएको बीबीसीले जनाएको छ। लिभरपुल र मानेबीच आगामी समरसम्मका लागि सम्झौता रहेको थियो। माने सन् २०१६ मा ३४ मिलियन पाउन्डमा साउथह्याम्पटनबाट लिभरपुलमा आबद्ध भएका थिए। […]
नेपालको डिआरएस पब्जी बिश्वकपको फाइनलमा प्रवेश
२०७८ पुष ७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशीको ‘पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप’ मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । अनलाइनमार्फत सुरु भएको खेलमा विश्वका पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रका गरी ४० वटा टीम सहभागी हुँदैछन् । प्रतियोगितामा नेपालबाट दुई वटा ‘डिआरएस’ र ‘डिई’ क्लब सहभागी हुँदैछन् । लिग चरणका खेलहरु १९ डिसेम्बरसम्म हुनेछ भने लिग चरणका फाइनल खेलहरु २२ […]
माउन्टेन ड्यूद्वारा ‘पब्जी’ सँग हातेमालो
२०७७ आश्विन ८ गते २०७७ आश्विन ८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं, ८ असोज । ‘माउन्टेन ड्यू’ले विश्वमै सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको मोबाइल खेल ‘पब्जी मोबाइल’सँग साझेदारी गर्ने घोषणा गरेको छ । माउण्टेन ड्यूले ‘पब्जी मोबाइल’सँग साझेदारी गरेसँगै स्पोर्ट्सका पेशेवर खेलाडीहरु र प्रशंसकहरुमाझ गेमिङ्ग उद्योगमा नवीनता र उत्साह जागृत गर्नको लागि अर्को एक महत्वपूर्ण चरणको संकेत गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, ‘पब्जी मोबाइल’का साथै माउण्टेन ड्यूले स्पोर्ट्स् […]
नुवाकोटे टाइगर बने हेविवेट च्याम्पियन, हात पारे नगद ८५ हजार
२०७९ बैशाख १ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
अमेरिकी रेस्लर स्ट्रोमलाई नेपाली चेली अस्मिताले हराइन्
२०७८ मंसिर १९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं । नेपाली रेस्लर अस्मिता जुरेलीले अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिताको सिंगल फाइटमा अमेरिकी रेस्लरलाई पराजित गरेकी छन् । प्रतियोगिताकै मुख्य स्पर्धा सिंगल फाइटमा जुरेलीले अमेरिकाकी जेसी स्ट्रोमलाई प्रतिस्पर्धात्मक भिडन्तमा हराएकी हुन् । भृकुटीमण्डपमा दर्शकको उल्लेख्य उपस्थितिमा भएको खेलमा अस्मिताले स्ट्रोमलाई पराजित गरेकी हुन् । नेपाल महिला रेस्लिङ प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको टु भर्सेस वान फाइटमा नेपालका नेपाली […]
पोखरा म्याराथन फागुन पहिलो साता हुने, विजेताले चार लाख पाउने
२०७८ कार्तिक १७ गते २०७८ कार्तिक १७ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडाै‌‌ । सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन फागुन पहिलो साता हुने भएको छ । आयोजक नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै १६औं संस्करणको प्रतियोगिता ७ फागुनमा गर्ने बताएको हो । यसपटक आयोजकले पुरस्कार राशिमा बढोत्तरी गर्दै पोखरा म्याराथनमा सहभागी हुने धावकहरूलाई थप आकर्षण दिने प्रयास गरेको बताउँदै पुरस्कार राशिमा समेत वृद्धि गरिएको छ […]
अन्य खेल टोकियो ओलम्पिक
टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी एलेक्सले आज प्रतिस्पर्धा गर्दै
२०७८ श्रावण १२ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं । टोकियो ओलम्पिकमा नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर शाह (एलेक्स)ले आज पुरुष १०० मिटर फ्रि स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यो खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पौने ४ बजे टोकियो एक्वेटिक सेन्टरमा हुनेछ । ७ खेलाडी रहेको यस स्पर्धामा उनी छैटौँ लेनमा छन् । एलेक्ससँग प्यालेस्टाइन, भुटान, माल्दिभ्स, कोसोभो, गुएना र सोलोमोन आइसल्याण्डका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् […]
पहिलो चरणबाटै बाहिरिन् कान्छी खेलाडी जाजा
२०७८ श्रावण ९ गते २०७८ श्रावण ९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
एजेन्सी। टोकियो ओलम्पिकमा सबैभन्दा कान्छी खेलाडी सिरियाकी हेन्ड जाजा पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छन्। १२ वर्ष २०५ दिनकी जाजा टेबलटेनिसमा अष्ट्रियाकी ३९ वर्षिया लिउ जियासँग ४–० ले हारेकी हुन्। हारपछि प्रतिद्वन्द्वीसँग सेल्फी लिएकी जाजाले भनिन्, ‘‘मानसीक रुपमा ओलम्पिक तयारी धेरै कठिन हुने रहेछ। हारले पाठ सिकाएको छ। अर्कोपटक कडा मिहिनेत गरेर अघिल्लो राउन्डमा पुग्नेछु। यो प्रतियोगितामा […]
ओलम्पिकमा सहभागि हुन सोनिया र कल्पना आज जापान प्रस्थान गर्दै
२०७८ श्रावण १ गते २०७८ श्रावण १ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर 0
काठमाडौं : जुडोकी सोनिया भट्ट र सुटिङकी कल्पना परियार टोकियो ओलम्पिकमा सहभागि हुन आज जापान प्रस्थान गर्दैछन् । त्यस्तै जुडोका प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ र शुटिङका प्रशिक्षक असिम यादव पनि आजै जापान प्रस्थान गर्दैछन्। आज टोकियो जाने टोलीको नेतृत्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवालले गर्दै छन् । सिलवाल टोकियो ओलम्पिकको लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको ‘सेफ द […]
मेरो खेलकुद टि.भी